Azụmaahịa | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ịkwụ ụgwọ maka nnyefe? Nkọwa, nkwenye na nsogbu nsogbu
N'ụzọ dị mwute, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị na-emepụta ego anaghị eche na ha nwere ike ịrịa ọrịa, hapụ ọrụ ha ma ọ bụ banye n'ọnọdụ ụfọdụ siri ike karị. Dị ka a na-achị, nsogbu na nkwụsi ike anaghị ebili n'ihi ...
Ebee na esi esi etinye ego na oke pasent?
Inwe ego n'enweghị ego na oge mmiri ozuzo bụ mkpebi siri ike. Ọbụna n'agbanyeghị ọnọdụ siri ike na mba ahụ, ị ​​nwere ike ichegharị mmefu ego nke ezinụlọ gị ka i wee nwee ike ịmalite ịchekwa ego, na-akpụ, ya mere ...
Ekele mmanụ ụgbọala na Russia
Ntinye na mmanụ ụgbọ ala na mmanụ bọmbụ diesel bụ ụdị ụtụ isi na-adakwasị ndị ọchụnta ego na òtù. A na - ewepu ha na arụmọrụ nke arụmọrụ ụfọdụ, gụnyere mmegharị nke ngwaahịa ndị dị n'akụkụ ókèala ndị omenala ...
Sberbank, ngwugwu "akụ na ụba" nke ụlọ akụ mkpanaka: nyocha
Maka usoro kachasị mma maka ọrụ Sberbank, ndị ahịa nwere ike rụọ ọrụ ọrụ Mobile Bank, nke enyere site na ijikọ ya ekwentị nke onye na-ejide kaadi kaadị nke ụlọ ọrụ Sberbank. “Mobile Bank” (“Ọnọdụ akụ na ụba”) tarifu…
Chiller - kedu ihe ọ bụ? Chiller Rhoss na ndị ọzọ
N'oge a, n'ọtụtụ ebe nke ọrụ ụmụ mmadụ, a na-eji ngwá ọrụ refrigeration akpọ chiller. Kedu ihe ọ bụ? Azịza maka nke a na ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ dị na isiokwu ahụ. Chiller - ihe ...
Azụ: ụdị ehi na àgwà ha. Anụ anụ na-agba anụ
A na-ekewa ụdị oke ehi na mpaghara atọ: mmiri ara ehi, anụ na mmiri ara ehi na anụ. A na-ahụ ụdị anụ ndị ikpeazụ kachasị elu site na ọnụ ọgụgụ kachasị oke na ibuwanye. A na-ejikwa anụ ehi ndị a kpuchie ya, ...
Zeolite gịnị? Zeolite eke na sịntetik. Zeolite: akụrụngwa, ojiji, uru na ọghọm
Aha nke mineral a dị ịtụnanya sitere n'aka Grik - "obụpde" na lithos - "nkume", n'ihi na mgbe a na-agbada ya n'ime mmiri ọ na-egosipụta ogologo oge n'ime ikuku.
Kedu otu esi amata ọdịiche nke gander site na goo: mpụga, àgwà na ihe anatomical
Ọkpụkpụ azụ taa bụ otu n'ime ụdị azụmahịa kachasị mma. Ọ bụghị onye ọ bụla na-azụ anụ ọkụkọ maara otú e si amata ọdịiche nke gander site na ọgazị. Ugbu a, ọ dị ezigbo mkpa iji ...
Otu esi ebufe ego si Yandex na Qiwi naanị, ngwa ngwa, enweghị mfu?
Ruo ọtụtụ afọ, Internet aghọwo ọ bụghị nanị ebe ntụrụndụ, kamakwa ebe azụmahịa, azụmahịa akaụntụ, ịkwụ ụgwọ, ahịa na ọrụ. Ọ dịghị mkpa ikwu, ịkwaga ego ...
Kedu otu esi agbaziri na Beeline? Ònye bụ onye ọrụ dị njikere ịnye ego?
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-eme njem na telivishọn na-enye gị ọ bụghị naanị mma nkwurịta okwu, ọnụ ala dị nta maka oku, kamakwa ike ikwurịta okwu ọbụlagodi mgbe ị na-emefu ego na akaụntụ ahụ. ...
Kedu otu na mgbe esi egbutu currants
Usoro dị mkpa dị otú ahụ, dịka ịkụcha bọọlụ, bụ isi dị mkpa iji nweta ezigbo mkpụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, nha nke tomato na-aba ụba. Ya mere, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eche banyere ajụjụ ahụ ...
Kedu ihe bara uru iji ahia: atụmatụ na usoro
Tupu ịmepe azụmahịa nke pụrụ iche n'ịzụ ihe, ọ dị mkpa iji nyochaa ahịa ahụ n'ụzọ zuru ezu, ebe ọ mụtara otú ahia si azụ ahịa. A sị ka e kwuwe, ọ bụ mgbe niile ka ọ ga-ekwe omume na niche ahụ ị zubere itinye gị onwe gị ...
ID id - gini ka ọ bụ?
Na nso nso a, FSUE "Russian Post" agbanweela na ụkpụrụ ụwa nke ndị ahịa. Nke a na-apụta, na mgbakwunye na imeziwanye ọrụ ọrụ na kọmputa na ịmepụta ọnụ ọgụgụ kachasị nke usoro ozi, iji ihe dị ọhụrụ ...
Ihe nkedo nke DRK-250 na-eme onwe ya ka ọ bụrụ ihe dị iche iche
Ọ bụghị mgbe niile ka a na-emepụta ika ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ ọ na - egosi na ọ bụ nkwekọrịta n'etiti mba ndị na - emepụta, mgbe ahụ ọ na - ekewapụ. Ọtụtụ mgbe, o nwere àgwà dị iche iche n'ime nne ma ọ bụ nna. Bright ...
Kedu ihe bụ isi ụlọ akụ? Akụ akụ na ụba nke ntinye ego. Oge ịkwụ ụgwọ
Atụmatụ azụmahịa Pizzeria site na A ruo Z. Otu esi emeghe pizzeria
Kwa ụbọchị maka ọtụtụ n'ime anyị isiokwu nke ịmalite azụmahịa anyị na-aghọwanye ihe dị mkpa karị. Obodo a na-ama jijiji mgbe nile site na ọdụm akụ na ụba, mgbe niile na-eche banyere ma ọ ga-ezite echi na-arụ ọrụ ...
Barn na ewu feeder. Ewu na-edebe maka ndị na-amalite
Egwu, n'ụzọ zuru oke megharịrị n'ọnọdụ ọ bụla, nwee ahụike dị mma ma chọọghị nlekọta pụrụ iche. Ya mere, taa, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ ugbo ulo amalitewala ịzụ ụmụ anụmanụ ndị a. Ha ọdịnaya dị mma mara mma ...
Silicone Nri: Ngwakọta, Ngwa
Silicone bụ ihe a na-ejikarị eme ihe taa maka imepụta ngwaahịa maka nzube dị iche iche. Ọ nwere ike ịbụ molda (ụdị ebumnuche maka ịmepụta ihe oyiyi, ọla, wdg), akụrụ azụ, ...
Ihe na-egbu egbu: nkọwa, nkọwa na nyocha.
Ngwurugwu maka ịkụ anụ ụlọ na nhazi ọzọ nke anụ ahụ e mepụta bụ usoro dị mgbagwoju anya na usoro ọhụụ. Teknụzụ na-agụnye iji ngwá ọrụ pụrụ iche, nke gụnyere mpaghara maka nchekwa, nchekwa na ichebe ozu. ...
Kaadị Sberbank: ụdị na ụgwọ ọrụ (foto)
Egotara kaadị akụ ka ọ bụrụ n’ahịa n’oge na-adịbeghị anya - n’etiti narị afọ 20. N’agbanyeghi nke a, ha aghọọla ngwaahịa a ma ama n’ihi nkasi obi ha na-enye onye ọrụ ahụ. N'otu oge ahụ, kaadị ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,165.